यूट्युबमा रुचाइयो त ‘वीर विक्रम २’ ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
यूट्युबमा रुचाइयो त ‘वीर विक्रम २’ ?
कोरोना भाइरसका कारण सिनेमा हल बन्द भएर दर्शकले नयाँ चलचित्र हेर्न नपाए पनि यूट्युबमा हप्तैपिच्छे नेपाली चलचित्र रिलिज भइरहेका छन् । यसबीच, मंगलवार अभिनेता द्वय पल शाह र नाजिर हुसेन स्टारर चलचित्र ‘वीर विक्रम २’ पनि यूट्युबमा उपलब्ध भएको छ । गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको मिलन चाम्स निर्देशित यो चलचित्र बक्सअफिसमा असफल सावित भएको थियो ।
पटकथा र प्रस्तुतीकरण कमजोर हुँदा चलचित्रले ‘वीर विक्रम’ को साख जोगाउन सकेको थिएन । दुई साथीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा वाचन गरेको चलचित्रमा पल र नाजिरसँगै वर्षा सिवाकोटी, बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारको अभिनय छ । यूट्युबमा सार्वजनिक भएसँगै चलचित्रलाई दर्शकको उल्लेख्य साथ मिलेको छ । प्रतिक्रिया भने मिश्रित पाएको छ ।
यूट्युब रिलिजको २४ घण्टामा चलचित्रलाई १० लाख बढी भ्यूज, ४६ हजार लाइक्स र ३ हजार बढी कमेन्ट प्राप्त छ । कमेन्टमा नाजिर हुसेन र बुद्धि तामाङको अभिनयको प्रशंसा गर्नेको संख्या ठूलो छ । कतिले भने अभिनेता दयाहाङ राई नभएका कारण चलचित्र राम्रो नलागेको बताएका छन् । कथावस्तु र प्रस्तुतीकरण कमजोर रहेको प्रतिक्रिया पनि चलचित्रले धेरै पाएको छ ।
४ वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको ‘वीर विक्रम’ को सिरिजको रुपमा मिलन चाम्सले ‘वीर विक्रम २’ बनाएका थिए । पहिलो पार्टमा दयाहाङ राई, अनुपविक्रम शाही, नाजिर हुसेन, दीया पुन मुख्य भूमिकामा थिए । अहिले यो चलचित्रको सिक्वेल निर्माण हुन लागेको चर्चा छ । ‘वीर विक्रम’ जहाँ अन्त्य भएको थियो त्यहीँबाट सिक्वेल निर्माण गरिँदैछ । चलचित्रको कथा तयार भइसकेको छ ।